Skywatch Observatory Domestays - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguGary And Merril
UGary And Merril yi-Superhost
I-Skywatch Observatory Domestays yindlu yabucala yamagumbi kwindawo yethu enkulu yokuhlala ngezitena zodaka. Ilungele izibini, iintsapho okanye amaqela amancinci ukuba abe namava esibhakabhaka ebusuku kunye neendlela zokuhamba ezimangalisayo zepaki yesizwe yaseWarrumbungle kunye nehlathi lasePilliga.
Iindwendwe zibonelelwa ngokhenketho lwasimahla lwesibhakabhaka ebusuku ukusuka kwindawo yethu yokujonga kunye neqonga lokujonga. Isidlo sakusasa esiphekiweyo esipheleleyo, esifumaneka emva kwe-7:30 am, sikwaqukiwe.
Izixhobo zeAstrophotography kunye nesikhokelo esivela kuGary siyaqeshwa
Yakhiwa ngo-1994, indawo yokujonga iSkywatch yindawo enkulu yokuhlala yezitena zodaka ebekwe kumhlaba weehektare ezi-3 kunye nenkangeleko yasemaphandleni. I-observatory imodeli ye-Anglo Australian Telescope e-Siding Spring kwaye iyinqaba ephakamileyo yeemitha ezili-12 kunye ne-geodesic dome yendlu ye-14 intshi ye-Schmidt-Cassegrain telescope.
Indawo yokuhlala yindlu yabucala kwisakhiwo esikhulu kwaye inamagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlala / lokuphumla kunye negumbi lokuhlambela. Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwindawo yokonwabisa / yokutyela, ikhitshi, ibala yegalufa encinci, indawo yokujonga kunye negadi yemveli.
Kuba nabani na onomdla kwi-astrophotography sinezixhobo zokuqesha kwaye sizimisele ukukunceda ngokukufundisa izakhono ezisisiseko ezinxulumene nokuthatha iifoto ezimangalisayo zesibhakabhaka ebusuku.
4.89 · Izimvo eziyi-446
I-Skywatch ikwiihektare ezi-3 ze-NSW yasemaphandleni enesibhakabhaka esimnyama kunye nendawo enoxolo enesandi seentaka kusasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Gary And Merril
Sidla ngokuba lapha ukuze iindwendwe zikwazi ukunxibelelana nathi njengoko kufuneka.